Vokatra - Wuhan Golden Laser Co, Ltd
The laser laser dia mety tsara amin'ny fanodinana ny lamba vita amin'ny lamba fanaingoana sublimation amin'ny endriny rehetra sy ny habe. Mamoaka ny lamba ny cameras, mamantatra ary manaiky ireo takela-pirinty vita pirinty, na koa maka ny marika fisoratana anarana vita pirinty ary tapaho ireo endrika voafidy miaraka amin'ny haingana sy ny mahitsy.
Model No. .: CJGV-190130LD
Vina fanétrehana Laser ho an'ny milina fanontana vita amin'ny fanavaozana
Ny fanendahana laser miaraka amin'ny fijerena fahitana dia manangana rafitra fametahana laser tonga lafatra ho an'ny famonosana lamba vita amin'ny loko. Mamoaka ny lamba ny fakan-tsary mandritra ny fandrosoan'ny kaonty, ahitanao ny contour vita pirinty na mamaky ireo marika fisoratana anarana…
Mantsary fahitalavitra tsy miankina mahaleo tena Dual head
Ny rafi-pandrefesana laser roa tsy miankina dia mitambatra tsara amin'ny rafitra fahitana hendry, ary natao tsara kokoa amin'ny fepetra takian'ny fanamboarana sary vita pirinty.
Ny fisoratana anarana marim-pototra avo dia manamarika ny toerany ary ny fanonerana an-tsaina matotra ho an'ny fanapahana tariby amin'ny fanaingoana lohamilina vita pirinty vita pirinty, taratasy ary isa.
Model No. .: QZDMJG-160100LD
Smart Vision Laser Cutter miaraka amin'ny fakan-tsary ho an'ny kofehy
Io milina laser mahery io hanotanana ny contour. Miaraka amin'ny fitaovana fakantsary HD, afaka maka sary an-tsary ny modely vita pirinty na misy kofehy vita amin'ny milina, ny milina dia mamantatra ny fizotry ny modely ary avy eo manome toromarika tapaka momba ny lohan'ny laser.
Ny mpijery laser vina lehibe dia natao manokana ho an'ny indostria pirinty nomerika - famokarana tsy manam-paharoa amin'ny famandrihana endrika endrika misy sary na sary vita amin'ny soratra, na sora-baventy ary sora-tanana malefaka.
Masinina manapaka laser ho an'ny lamba sivana, fitaovana sivana, haino aman-jery sivana
Model No. .: JMCCJG-250350LD
Airbag Laser Cutting Machine miaraka amin'ny Multi-layer Auto Feeder
Vahaolana volamenalasera natokana ho an'ny fanodikodinam-bokatra airbag hiantoka ny kalitao, ny fiarovana ary ny famonjena, mamaly ny fihanaky ny fantsom-pifandraisana notakian'ny fenitra fiarovana vaovao.
Model No. .: JMCCJG-160200LD
CO2 Laser Cutter ho an'ny landy fiarovana famonosana poizina hafanana
Laser cutter indrindra ho an'ny hafanana mihena ny fihenan'ny tànana vita amin'ny mando vita amin'ny marika PET (polyester) ary mampihena ny fibre polyolefin. Tsy fanelingelenana ny sisiny manapaka noho ny fanodinana maoderina.
Ny fitambaran'ny endrika X lehibe, Y axis laser cut (trimming) ary ny hafainganam-pandeha ambony indrindra Galvo laser perforating (laser cut hole). Izy io dia natao ho fanapaka ny rindrina fihodinana amin'ny lamba (sock duct, vovoka sox, duct sox, sock sock, trafika rivotra mifono rivotra, sock rivotra, rivotra iainana)
Model No. .: JYCCJG-160600LD / 160900LD / 1601300LD
Volom-baravarankely miloko mainty lava be dia be
Model No. .: JMCZJ (3D) 160100LD
Masinina misy milina CO2 Galvo miaraka amin'ny Mpanolo-tsaina momba ny fanoratana fahatsiarovana
3D rafitra laser laser dinika
Faritra fanodinana fotoana 450 × 450mm
Mahavariana mirakitra seamless hatramin'ny 1600mm
Hanolaka ny fahaiza-manao roll
Mivadika any amin'ny Masinina Famoronana Laser Flying Laser
3D rafitra Galvo mavitrika, mamarana ny fanoratana mitohy amin'ny dingana iray. Teknolojia laser "amin'ny lalitra". Mety amin'ny lamba vita amin'ny lamba, textile, hoditra, denim, sary sokitra EVA.
Model No. .: ZDJMCZJJG-12060SG
SuperLAB | XY Gantry & Galvo laser machine miaraka amin'ny Camera Camera
SuperLAB, marika laser mitambatra, manindrona laser ary manapaka laser, dia foibe fanodinana laser CO2 ho an'ny tsy metaly. Manana ny anjara asan'ny toerana misy ny fahitana, fanitsiana fototra sy fifantohana auto…
Model No. .: ZJ (3D) -170200LD
Galvo Laser fanaka miady amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra ho an'ny indostrian'ny kiraro
Ny ambony indrindra hafainganam-pandeha ary ny fanoratana laser amin'ny endrika lehibe. Drafitra fanindroany miaraka amin'ny rafitry ny famolavolana fitaovam-piadiana. Optimizedé galvanometer rafitra.
Mitaingina mitaingina kiraro avo indrindra Galvo Laser ho an'ny kiraro hoditra
CO2 RF laser laser 150W 300W 600W. 3D rafitra fanaraha-maso galvanometer 3D. Manaraka sy mihena Z axis. Fantson-dàlana vita amin'ny tantely vita amin'ny tantely vy-vy.
Model No. .: Series Series
MARS Series CO2 Laser Cut and Machine fanaka
Ny MARS Series dia manasongadina ny masin-tsolin'ny CO2 laser fidirana ary ampiasain'ny mpanjifa amin'ny fanapahana sy fanoratana ny lamba, hoditra, hazo, acrylika, plastika ary maro hafa.
Model No. .: MJG-160100LD / MJGHY-160100LD II
Rindrambaiko tokana / Mautera vita amin'ny lohalika miaraka amin'ny fehin-kibo momba ny conveyor
Toeram-piasana 1600mmx1000mm (63 ″ x 39 ″)
Ny fandriana conveyor no namboarina niaraka tamin'ny horonan-taratasy roll
Ny lohany laser Dual dia mamela ny tapany roa ho tapaka mitovy
Model No. .: MJG-13090SG
Mamatotra milina fanoratana amin'ny Laser miaraka amin'ny latabatra fanangana herinaratra
1300mm × 900mm (51 "× 35")
Fantsona laser fitaratra CO2 80 watatra ~ 150 watts
Safidy tantely sy ny latabatra safidy latabatra
Model No. .: fanatanjahantena XBJGHY-160100LD II
Miasa tsy miankina Dual Head milina fanendahana laser ho an'ny kiraro tongotra
Loha laser roa izay miasa tsy miankina samy manana, afaka manapaka ny kisary samy hafa miaraka miaraka. Karazan'aretina laser (fanendahana laser, fanoratana, fanoratana, sns) dia azo atao indray mandeha.
Model No. .: ZDJG-3020LD
Laser Cutter mandeha amin'ny Camera Camera sy Roll Feeder
Faritra miasa 300mm × 200mm
Mety tsara amin'ny fanapahana marika vita amin'ny boribory, ribon, tranokala, Velcro ivelan'ny horonan-taratasy ao anatin'ny 200mm ny sakany
Model No. .: ZDJG-9050
Fanapahana laser Laser Camera ho an'ny marika tenona, patch patch
Mpanapaka laser miaraka amin'ny fakantsary CCD nakarina tamin'ny lohan'ny laser. Namboarina manokana ho an'ny takelaka vita amin'ny lamba, pataloha amboradara ary fanapahana karatra.
Famonoana laser tsy misy atsy sy manova ny vahaolana ho an'ny famandrihana marika. Ny mpamaky kaody QR dia manohana ny fanovana mandeha ho azy amin'ny sidina. B Guide Web BST dia manao tsara kokoa ny tsy milamina sy miverimberina.
LC230 dia milina famoronana laser maoderina mihetsika, ekonomika ary tanteraka amin'ny sakan'ny tranokala farany indrindra mmmmmm. Safidy tsara ho an'ny hazakazaka fohy digital io. Manolotra fiovan'ny aotra amin'ny fotoana maharitra ary tsy misy vidiny maty.
Model No. .: LC230
Laser Die Cutting Machine ho fitaovana famerenam-boky / famindrana sarimihetsika
Laser akora taratry ny maty, tonga lafatra amin'ny indostrian'ny akanjo hita maso. Automatique fizarana rehetra. Fametahana laser tsara indrindra
Model No. .: P2060A / P3080A
Fitaovam-pamokarana mandeha an-tsolika vita amin'ny lozika feno loaka
Mantsangam-peo vita amin'ny laser mikarakara fantsom-pamenoana miaraka amin'ny fametrahana mavesatra sy famoahana entana. Manapaka ny mombamomba ny boribory boribory, zoro, efajoro ary ny fantsona hafa mba hanomezana fahafaham-po ny filan-tsipika fanodinana.
Io milina fanenomana laser tiana simika io dia miaraka amina mpanefy manual ary rindrina feno natao hamokarana faritra avo lenta amin'ny endrika sy habe.
Model No. .: GF-1530T / GF-1540T / GF-1560T
Sheet metaly sy milina fanoratana lasibatra laser
Ny famolavolana mitambatra dia manome fiasa roa samy hafa ho an'ny takelaka metaly sy ny fantsona. Ny herin'ny laser 1W ~ 3KW, faritra notapahana 1.5 × 3m, 1.5 × 4m, 1.5 × 6m, Tube lava 3m, 4m, 6m, Φ20-200mm
Model No. .: GF-1530JHT / GF-1560JHT / GF-2040JHT / GF-2060JHT
Fitaovana Pallet Changer Fane Laser Fihirana feno sy milina fanoratana vy vita amin'ny vy
Mihoatra tariby fibra laser fanatanjahan-tena miaraka amina fonony voaro tanteraka, latabatra fifanakalozana ary fitaovana fantsom-bidy fampihenana. Ny takelaka vita amin'ny metaly sy ny fantsona dia azo esorina amin'ny milina mitovy.
Model No. .: P2080
Indrindra ho an'ny laser manapaka ny fantsona vy amin'ny boribory, kianja, ny efatra, ny oval, ny fantsona ary ny fantsona misy kofehy hafa. Ny halavam-baravarankely ivelany mety ho 20-200mm, lava 8m.
6000W 8000W Mibera fanoherana laser
Fitaovana mahery sy lehibe mpanamboatra fibre laser endrika. BECKHOFF CNC mpifehy. 2,5m × 6m, faritra manodidina ny 2,5m × 8m. Ny haingam-pandeha ambony indrindra 30mm CS, 16mm SS